नि: शुल्क व्यापार कार्डहरू ... किन उनीहरू दुध दिन्छन् र तपाईंले आफ्नो समय खेर फाल्नु हुँदैन - Print Peppermint
डिसेम्बर 3, 2019 | व्यापार कार्ड आधारभूत, मुद्रण, सुरूवात
हाँ, नि: शुल्क व्यापार कार्ड धेरै लोभ्याउने छन् र उनीहरूलाई पैसा चाहिन्छ कि कसले चाहँदैन? बढ्दो उद्यमीहरू र साना व्यवसाय मालिकहरू प्राय: यी निःशुल्क कार्डहरूलाई पैसा बचत गर्ने तरिकाको रूपमा देख्दछन्, बचत गरिएको पैसा व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दै। हामी तपाईलाई मन्जुर गर्न चाहान्छौं, हामीले तपाईलाई पोइन्ट-रिक्त बताउनु पर्छ कि नि: शुल्क व्यापार कार्डहरू दुखी हुन्छन्!
होईन, यो तपाईंलाई महँगो ब्यापार कार्ड बेच्नको लागि विज्ञापन होईन वा तपाईंलाई महँगो र विशिष्ट व्यापार कार्ड छ भने मात्र तपाईंलाई राम्रो देखिन सक्छ भन्न सकिन्छ। यसको विपरित, तपाईं आफ्नो जेबमा प्वाल नलगाईकन राम्रो गुणहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर, नि: शुल्क व्यापार कार्डहरू पूर्ण नम्बर नन्।
यदि तपाईं फेंस सिटर हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहनुभयो भने नि: शुल्क व्यवसाय कार्डमा के गल्ति भयो, आउनुहोस् हामी तिनीहरूसँग तपाईंको समय किन बर्बाद गर्दैछौं भनेर बताउनुहोस्।
पहिलो प्रभाव कुरा
जब तपाईं पहिलो पटक कसैलाई भेट्नुहुन्छ र आफैलाई वा तपाईंको व्यवसाय बढावा दिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं राम्रो प्रभाव सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं चलाखीपूर्वक लुगा लगाउनुहुनेछ, तपाईंको न nailsहरू ठीकसँग मैनिक भएको छ, फर्म ह्यान्डशेक सुनिश्चित गर्नुहोस्, आँखा सम्पर्क गर्नुहोस् र पक्कै पनि, कस्तूरी वा अत्तरको साथ आफूलाई डाउज गर्नुहोस्। जबकि यो नियमित मार्फत जान पूर्ण रूपमा ठीक छ, आफ्नो व्यवसाय कार्ड मनन गर्न समय खर्च गर्नुहोस्।
यदि कार्ड सस्तो देखिन्छ र तपाईं भावी ग्राहकहरूको प्रस्ताव गरिरहनु भएको गुणस्तरमा उठ्दैन भने, के तपाईंलाई लाग्छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई गम्भीरताका साथ लिन्छन्? तिनीहरूले वास्तवमा सोच्दछन् कि तपाईं सस्तोस्केट हुनुहुन्छ र कुनाहरू काट्नुहुनेछ। किन? सबै एक निःशुल्क व्यापार कार्ड को कारण ट्याकी र ईन्फेरियर देखिन्छ। निश्चित रूपमा त्यो छवि होईन जुन तपाईं सम्भावित ग्राहकको साथ तपाईंको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए, एक राम्रो वेबसाइट जस्तै तपाइँको विशेषज्ञता र दक्षता प्रदर्शन गर्दछ, तपाइँको व्यापार कार्ड पनि राम्रो हुनुपर्दछ र तपाइँको मान झल्काउछ। एक निःशुल्क व्यापार कार्ड छैन। अवधि
ब्रान्डि Where कहाँ छ?
नि: शुल्क व्यापार कार्डको साथ, तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि आवश्यक ब्रान्डि get प्राप्त गर्नुहुने छैन। आउनुहोस्, केहि विचार गर्नुहोस्। के प्रिन्टर (अफलाइन वा अनलाइन) वास्तवमा केहि पैसाको लागि तपाईंको कार्ड ब्रान्डिंगमा पैसा खर्च गर्दछ? अवश्य पनि, यो एक लाख बर्षमा हुनेछैन। त्यसोभए, तपाईंको व्यवसाय कार्ड ब्रान्डि instrument उपकरणको रूपमा काम गर्ने सम्भावनाको बारे बिर्सनुहोस् यदि तपाईं ती तथाकथित निःशुल्क व्यक्तिहरूको लागि छनौट गर्नुहुन्छ।
भगवानको खातिर, तपाइँको ब्यापार कार्डमा हेर्नुहोस्। यसको अर्थ के हो? यो तपाइँको व्यवसाय को प्रतिनिधित्व गर्दछ र एक नि: शुल्क व्यापार कार्ड तपाइँको व्यवसाय वा ब्रान्ड न्याय गर्दैन। यदि कार्ड सस्तो छ र हतार गरेर डिजाइन गरिएको छ (जुन तपाईं "फ्रि" ट्रिकको लागि खस्दा के हुन्छ), कसैले पनि तपाईंलाई गम्भीर रूपमा लिने छैन। तपाइँ एक सफल व्यापारी वा पेशेवर बन्ने सपनाहरु लाई भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं पहिलो पटक कसैलाई भेट्नुहुन्छ, यो सबै कुरा सिर्जना गर्नु हो जब तपाईं व्यापार कार्ड आदानप्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईंलाई के आवश्यक छ एक राम्रो डिजाइन गरिएको व्यवसाय कार्ड हो जुन तपाईंको ब्रान्डको प्रदर्शन गर्दछ र यसलाई राम्रो सम्भावित प्रकाशमा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
क्वालिटी ओभर क्वालिटी
नि: शुल्क व्यापार कार्ड गुणवत्ता भन्दा बढी मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। हो, तपाईंले त्यो पहिले नै हौं। के तपाईले यो नयाँ जोखिम व्यवसायलाई बढाउन र विस्तार गर्न र तपाईको छनौट क्षेत्रमा ठूलो बनाउने क्रममा लिनको लागि त्यस्तो ठूलो जोखिम छैन? हामी हो भन्न सक्छौं, तर तपाईं फरक माग्नु सक्नुहुन्छ।
यो ठूलो संख्यामा व्यापार कार्डहरू नि: शुल्क पाउनको लागि मोहित ध्वनि गर्न सक्दछ। तपाईं खराब प्रिन्टि and र अवस्थित डिजाइनको पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, तपाईले काबिलको मुनिको जो पनि महत्वपूर्ण छ सबै चीजहरु पक्का गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको व्यवसाय कार्डले तपाईं र तपाईंको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यदि गुणवत्ता कम हो भने, यसले तपाईंको र तपाईंको व्यवसायको नराम्रो चित्रण गर्छ। तपाईं चाहनुहुन्न कि सम्भावित ग्राहकहरू तपाईंसँग सहकार्यको बारेमा दोस्रो सोचाइ खराब डिजाइन र मुद्रित ब्यापार कार्डहरूको कारणले गर्नुहोस्।
प्रि-डिजाईन टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्ने ठूलो संख्या हो
नि: शुल्क व्यवसाय कार्डको साथ, तपाईं टेम्पलेटहरू छनौट गर्न वा छनौट गर्न सक्नुहुन्न वा अवस्थित टेम्पलेटलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्न तपाईंको व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्न। तपाईंले जेनेरिक टेम्प्लेटको लागि समाधान गर्नुपर्नेछ जुन व्यापक रूपमा भानिला आइसक्रीम जस्तो व्यक्तिलाई अपील गर्दछ। अवश्य पनि, तपाईं डिजाइनर हुनुहुन्न र सोच्न सक्नुहुन्छ कि सामान्य, पूर्व डिजाइन टेम्पलेट अगाडि जाने बाटो हो। तपाईंको ल्यापटप वा फोन स्क्रिनमा, टेम्प्लेट राम्रो देखिन्छ, त्यसो भएमा के हानि हुन सक्छ? दुर्भाग्यवस, यस धारणा संग सबै गलत छ।
एक व्यवसाय कार्ड तपाइँको पहिचान हो। एक नि: शुल्क ब्यापार कार्डले तपाईको व्यवसाय वा ब्रान्डको सार कब्जा गर्न सक्नेछैन। एउटा पूर्व-डिजाइन सामान्य टेम्पलेट केवल त्यो हो - जेनेरिक। तपाईं टेम्पलेट लिन र यसको वरिपरि टस गर्न सक्षम हुनुपर्दछ केही अनौंठो र विशेष सिर्जना गर्न। वा, तपाइँ अद्वितीय र रचनात्मक व्यापार कार्डहरू सिर्जना गर्न एक प्रोसँग काम गरिरहनुपर्नेछ जुन तपाइँको व्यवसाय र ब्रान्डलाई तपाइँले चाहानु भएको रंगमा रंगाउँदछ।
नि: शुल्क मतलब कुनै ग्राहक सेवा छैन
के तपाइँलाई लाग्छ वेबसाइट वा प्रिन्टर तपाइँलाई नि: शुल्क व्यवसाय कार्डहरू प्रदान गर्ने शीर्ष-निशान ग्राहक सेवा प्रदान गर्दैछ? यदि तपाईंले कार्डमा त्रुटि फेला पार्नुभयो भने तपाईंले त्यसलाई चूस्नुहुन्छ र चूप लाग्नु पर्छ। तपाईंले त्रुटि-तरल व्यापार कार्ड खन्नु पर्नेछ र नयाँ प्रिन्ट गर्नुपर्नेछ। व्यवसायमा समय पैसा हो र तपाईं मूल्यवान समय उत्पादक बिना नै खर्च गर्नुभयो यदि तपाईं निःशुल्क व्यापार कार्डहरूको साथ जानुभयो भने। यो केवल यसको लायक छैन।
जब तपाईं विज्ञहरू राख्नुहुन्छ, तपाईं आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको व्यवसाय कार्ड आउनेछ जस्तो गरी तपाईंले सोचेको जस्तो देखिन्छ। र perfectहरू उत्तम हुनेछन् र पाठ सहि पigned्क्तिबद्ध र मुद्रित हुनेछ। तपाईं टेम्पलेटलाई अन्तिम रूप दिनु अघि परिवर्तनहरूको माग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र त्यो यही हो जुन सशुल्क व्यापार कार्डहरू यत्तिको महान र सार्थक हुन्छन्।
नि: शुल्क व्यवसाय कार्ड सागामा एउटा रोमाञ्चक निष्कर्ष
त्यसोभए, यदि तपाईं अझै पनि नि: शुल्क व्यापार कार्डहरूमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो सम्बन्धित सबैकुरा बिर्सने समय हो। उठ्नुहोस् र कफि गन्ध - निःशुल्क लाभ, छाप र ब्रान्ड मा अनुवाद छैन। वास्तवमा यस सन्दर्भमा नि: शुल्क भनेको सस्तो र घटिया हो।
मलाई आशा छ कि यसले तपाईलाई विश्वस्त तुल्यायो कि नि: शुल्क व्यवसाय कार्ड तपाईको व्यवसायको लागी बाँकी हो, र सम्भावित ग्राहकहरु लाई पैसाको चिमन्सी जसको नाम भुलाउने बिर्सिएको छ भनेर सम्झनु भन्दा यो राम्रो हुनु हुँदैन।
व्यापार कार्डहरूमा अन्य लेखहरू तपाईंले रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ
10 शीर्ष १० रचनात्मक घर जग्गा व्यवसाय कार्डहरू - प्रेरित हुनुहोस्!
के मि व्यापारिक कार्डहरू तपाईले पाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि अधिक मूल्य निर्धारण गरिन्छ? →